Daqiiqadihii Waalida Gerrard – Man United Oo 10-nin oo Liverpool ah Karbaashtay
HomeWararka MaantaDaqiiqadihii Waalida Gerrard – Man United Oo 10-nin oo Liverpool ah Karbaashtay
LIVERPOOL, England (AP) — Steven Gerrard ayaa kaadh ka cas dibada loogu saaray in ka yar daqiiqad markii uu garoonka ku jiray ciyaar Manchester United ku garaacday Liverpool 2-1 Axadii oo ku tirsanayd horyaalka Premier League iyadoo uu labadaba ka dhaliyey Juan Mata.
Laacibka 34 jirka ah ee Gerrard ayaa casaan toos ah lagu abaal mariyey kadib markii uu ku xanaaqay Ander Herrera markaas oo uu ku soo gallay bedelka ciyaaryahan Adam Lallana bilowgi qaybta labaad ee kulanka.
Mata ayaa shabaqa ruxay daqiiqadii 14 aad ee ciyaartan labada kooxood ku dhex martay garoonka Anfield waxaanu labeeyey daqiiqadii 59 aad ee qaybtii dambe kadib markii uu kubad qurux badan ka hellay saaxiibkii Angel de Maria.
Daniel Sturridge ayaa Liverpool u soo celiyey goolka madiga ah daqiiqadii 69 aad ka hor intii aanu Manchester kubad rigoodhe ah oo loo qabtay ka khasaarinin Wayne Rooney taas oo uu isku duubay goolwadaha Liverpool Simon Mignolet dhamaadkii ciyaartii.
Halyeygii kubada cagta caalamka ee reer Brazil, Pele ayaa kamid ahaa shacabka u soo daawasho tagay ee garoonka Anfield u soo fadhiistay si ay u daawadaan kulanka dhaqan ahaan Ingiriiska looga tixgaliyo kan ugu culus kubada cagta UK.
Kooxda kaalinta 4 aad fadhida ee United ayaa cidhiidhsatay darajada ay ugu gudbayso horyaalka Champions League waxaanay shan dhibcood oo nadiif ah ka tagtay kooxda kaalinta shanaad ee Liverpool.
Yulia Stepanova oo Loo ogolaaday ciyaaraha Olympics-ka ee Rio
01/07/2016 Abdiwahab Ahmed